यी चार राशिहरूलाई मानिन्छ भा ग्यमानी राशि, तपाईंको कुन हो ?
Homeबिबिधयी चार राशिहरूलाई मानिन्छ भा ग्यमानी राशि, तपाईंको कुन हो ?
काठमाडाैं । ज्योतिषी भाषाअनुसार भन्ने हो भने तपाईहाम्रो जीवन राशिअनुसार चल्छ । तपाईमाथि गृह, नक्षेत्रको के कस्तो प्रभाव परेको छ, यो कुरा राशिले स्वतः दर्शाउँछ ।
भि न्डीका छन् य स्ता १४ फा इदा
‘क मेडी च्या म्पियन’ को आजको पाँचौ ए पिसोड (भिडियो)